Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo lala galay dowlada Turkiga – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray March 22, 2018 October 11, 2018
Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo lala galay dowlada Turkiga
MUQDISHO —Golaha Wasiirada Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay Magaalada Muqdisho, waxaana shir guddoominayey Ra’isul Wasaare Mudane Xasan Cali Kheyre.
Ra’isul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa golaha warbixin ka siiyey safarkii uu ku tagay dalka Hindiya, isagoo sheegay in Madaxweynaha dalkaas ay ka wada hadleen xoojinta xariirka labada dal, wuxuuna intaas ku daray in dowladda Hindiya oggolaatay in Visaha dalkaasi lagu gelo lacag la’aan looga dhigo Soomaalida.
4) Heshiiska Iskaashiga Isbitaalka Ordogan
Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federlka Soomaaliya, Xasan Xuseen Xaaji ayaa isna golaha ka hor sheegay inay meel wanaagsan marayaan qorshaha horumarinta Caddaaladda, waxaana goluhu isla gartay in dib u eegis lagu sameeyo, lana tayeeyo hanaanka cadaaladda dalka.
Hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee 2020-ka iyo sameynta xisbiyada badan ayuu sidoo kale golohu isku raacay in la dardar geliyo iyadoo lagu saleynayo dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka.
Qormadii HoreHore Ra’isul Wasaare Khayre oo Xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Talyaaniga
Qormada XigtaKu Xiga Raisul Wasaare Khayre oo shir dib u heshisiin ah u furay beelo ku dagaalamay Gobolka Sh/hoose